I-Villa ADRIANA kunye ne-PISCINA-Solo Affitti Brevi
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguTiziana
UTiziana unezimvo eziyi-102 zezinye iindawo.
I-villa yaseModica inamagumbi okulala ama-2 kwaye inomthamo wabantu abayi-6.
Yindlu entle kwi-villa ene-esclusive kunye nephuli yabucala, ifakwe ngobumnandi, ixhotyiswe ngokupheleleyo, kwaye iyi-200 m². Inombono wegadi kunye nedama lokuqubha.
Ipropathi itholakala kwi-800 m ukusuka kwisixeko saseModica, i-2 km ukusuka kwi-supermarket, i-4 km ukusuka kwisikhululo sikaloliwe saseModica, i-15 km ukusuka e-Marina di Modica sand beach, 120 km ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseCatania. Le ndlu ibekwe kwindawo elungele usapho kwindawo yokuhlala.
Le ndawo yokuhlala ixhotyiswe ngezi zinto zilandelayo: igadi, ifenitshala yegadi, igadi ebiyelweyo, iterrace, ibarbecue, indawo yomlilo, intsimbi, i-intanethi (Wi-Fi), isomisi seenwele, indawo yokuzivocavoca / indawo yokomelela, ukufudumeza okuphakathi, umoya-moya, indawo yokuqubha yabucala. , indawo yokupaka evulekileyo kwisakhiwo esifanayo, iTV, unomathotholo.
Kwikhitshi legesi evulekileyo ekhitshini, ifriji, i-oveni, isikhenkcisi, umatshini wokuhlamba, umatshini wokuhlamba izitya, izitya / izinto zokuhlambela, izixhobo zasekhitshini, umatshini wekofu kunye neketile zikhona.
Umbuki zindwendwe ngu- Tiziana
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Modica